27% ny mpivarotra no tsy manana drafitra tabilao ... Nefa! | Martech Zone
27% amin'ireo mpivarotra no tsy manana drafitra tablette….
Zoma Janoary 27, 2012 Douglas Karr
Tianay ny manana mpanohana matanjaka toa an'i Zoomerang sy ny azy ireo rindrambaiko fandatsaham-bato maimaim-poana hamantarana izay sy ny fahatsapan'ny mpivarotra ny atiny roa sy ny hanomezana hevi-baovao momba izay paikady aparitaka. Ny fanadihadiana farany nataonay dia nanontany momba ny drafitra ho an'ny mpivarotra raha ny momba ny tsenan'ny takelaka.
Tamin'ny taon-dasa, efa naminany i Forrester fitomboana lehibe eo amin'ny mpamaky sy ny takelaka tsena - ary novokarina ny tsena. Tsy namokatra tamin'ny varotra tsotra izy io, fa ny fihenam-bidy mahery amin'ny mpamaky sy ny takelaka mahatonga azy ireo ho mora kokoa noho ny finday!
Midika inona izany ho an'ny fikambanana misy anao? Soa ihany, manodidina ny 50% amin'ny mpihaino antsika no nilaza fa mikasa ny hanatsara ny tranonkalany hampiasa tablety…. fa mahagaga 27% no nilaza fa tsy nanana drafitra mihitsy izy ireo!
Hanao vinavina amin'ireo olona ireo aho eto… Ny fampiasa takelaka amin'ny tablette 2012 no hahafahanao mieritreritra ny drafitrao. Ireo mpamaky sy takelaka dia afaka manome traikefa famakiana tokana izay tsy vitan'ny tranonkala antonony. Ny rindranasa mandeha ho azy amin'ny famoahana boky, famakiam-boky fanatsarana takelaka vaovao sy lohahevitra CMS dia avoaka amin'ny taham-pahavoazana lehibe indrindra, ary ny tranokala mandray andraikitra (mifanaraka amin'ny haben'ny takelaka takelaka) dia manamora ny fiainana ny mpamorona.
Alefaso ny rohy Authorship sy Publishing amin'ny WordPress